Shariif Sheekh Ahmed oo lagu tuhmayo qaraxii maanta ka danbeeyey. Madaxtooyada oo la sheegay inuu raranayo!! Madaxweynihii la doortay oo hoteel degan!!! Labada Shariif oo lacago isku heysta.
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo qaadan la, guuldarada kasoo gaartay doorashadii dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in lagu tuhmayo inuu ku lug lahaa qaraxii maanta ay labada nin ee isqarxiyey ay la eegteen hoteelka Aljazeera oo uu deganaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Hassan Sheiik Mohamud.
Shariif Sheekh Ahmed ayaa la sheegayaa inuu ku calaacayo in meel kasta deyn looga leeyahay kadib markii uu ku bixiyey campaign-kiisa lacag dhan 20 milyan doolar. Shariif Hassan Sheekh Aden ayaa la sheegayaa inuu Madaxweynihii xilka waayey ka qaatay lacag dhan 10 milyan doolar, lacagtaas oo la sheegay in 5 milyan doolar ka mid ah lagu siiyey Shariif Xasan magaalada Dubai kadib markii ganacsato ka socota Shariifka ay uga yeereen Magaalada Dubai ee isutaga imaaraadka Carabta, lacagtaas oo la sheegay inuu dhamaanteed ku shubtay accounts uu ku leeyahay Dubai, Shariif Xasan oo markii uu ka soo laabtay dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaa Dubai la shiray xildhibaano gaaraya 80 oo taageerayaashia ahaa isaga oo u sheegay inay codkooda siiyaan Shariif Sheekh Ahmed, Xildhibaanada oo arintaa aad uga hor yimid ayuu Shariif Xasan ku laabtay Shariif Sheekh Ahmed isaga oo u sheegay in Xildhibaanadu qanacsanayn loona baahan yahay in lacag la siiyo Maadaama uu isagu qaatay 5tii milyan oo hore, madaxweyne Shariif ayaa 5 milyan oo kale u dhiibay Shariif Hassan lacagtaasoo xildhibaanada 80-ka ah laga siiyay min 30 kun doolar iyadoo loo balanqaadayna marka la guuleysto in la siin min 20 kun doolar.
Shariif Hassan ayaa la sheegayaa inuu Shariif Sheekh Ahmed u sheegay in arintaani tahay siyaasad lacag la isku celinayana aysan jirin ay labadoodubana guuldaradu ku wada dhacday. Shariif Hassan ayaa sidoo kale sheegay in isaga qudhiisa ay uga baxday lacag ka badan 10 milyan Doolar xiligii lagu jiray gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya, xiligaas oo Shariif Xasan uu la doonayay gudoonka Baarlamaanka Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr halka Shariif Sheekh Ahmed uu la doonayey Prof Jawaari.
Amniga Madaxweynaha Cusub ee soomaaliya ayaa qatar la geliyey kadib marka maanta la isku hor qarxiyey xili uu shir Jaraaid si wadajir ah ula qabanayay wasiirka arimaha Dibadda Kenya Musas Watanguula. Caawa ayaa la filayaa in madaxweynaha la geeyo Madaxtooyada Soomaaliya xili uu weli shariif ku sugan yahay Madaxtooyada.